Ny lalao baseball efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny baseball dia tsy fanatanjahan-tena be mpitia any Eropa. Ny fahombiazany dia mifantoka bebe kokoa amin'i Amerika Avaratra, any Etazonia mba ho voafaritra kokoa. Na dia izany aza, fanatanjahan-tena iray izay namorona lalao maro. Lalao ho an'ny Android ihany koa, satria nitombo ny fifantenana rehefa mandeha ny fotoana.
Noho izany, Avy eo avelanay ianao hifantina ny lalao baseball tsara indrindra ho an'ny Android. Lalao andiana lalao azonao atao misintona avy amin'ny Play Store ary miaraka amin'iza no hankafy ity fanatanjahan-tena ity. Vonona ny hijery an'ity lalao ity?
Ankoatra izany, ny zavatra tsara indrindra amin'ity fifantenana lalao ity dia azo sintomina maimaim-poana izy rehetra amin'ny fitaovana Android. Afaka mankafy an'ity fanatanjahantena ity isika raha tsy mandany denaria iray. Inona avy ireo lalao ao amin'ilay lisitra?
1 TAPAKA FIANARANA BASEBALL 2016
2 MLB 9 Fonenana 17
TAPAKA FIANARANA BASEBALL 2016
Momba izany iray amin'ireo lalao amin'ity fanatanjahantena ity miaraka amin'ny sary tsara kokoa. Marihina fa manana sary tena misy izy, ka toy ny nilalao baseball tena izy ilay mpampiasa. tAfaka milalao amin'ny MLB sy mitantana ekipa isika. Ankoatry ny famolavolana ny paikady hahafahana mitsangana ho mpandresy amin'ity ligy ity. Toy ny hoe isika lasa mpanazatra isika.
La maimaimpoana ity lalao baseball ho an'ny android ity. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika.
MLB 9 Fonenana 17
Lalao hafa ity mijanona ho mahatoky sy mitombina amin'ny ligy amerikanina ankehitriny, ny MLB. Amin'ity lalao ity dia azontsika atao ny milalao amin'ireo kianja 30 manatrika ny ligy. Ankoatry ny fahefana misafidiana mpilalao 800 misy izany ao. dia tsy maintsy asongadino ireo sary 3D amin'ity lalao ity, izay manampy amin'ny fanaovana azy ho zava-misy sy mahomby kokoa.
indray, maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na izany aza, ao anatin'ny lalao no ahitantsika ny fividianana handrosoana haingana kokoa.
MLB 9 Fonenana 21
Mijanona amin'ny baseball izahay fa miroso amin'ny lalao mavitrika kokoa isika. Ka tsy dia misy dikany loatra izany, fa mampiala voly tokoa. Ny sary manome azy hatsarana hafa ary mahatonga azy io tsy lalao fanatanjahan-tena hafa fotsiny. Inona koa, Marihina fa manana fomba lalao isan-karazany izy io. Zavatra iray izay mahatonga azy io ho safidy feno kokoa ho an'ny mpampiasa. Afaka milalao ligy hatramin'ny 128 isika ary manana maody fanaovana fanamby koa izahay.
Lalao mahafinaritra miaraka amin'ny sary tsara. Ankoatra izany, tsy mila mifandray amin'ny Internet milalao. ny maimaim-poana ny fampidinana ny lalao ho an'ny Android, na dia toy ny lalao hafa aza dia mahita mividy ao anatiny isika.
Developer: playus malefaka
Lohateny hafa izay miloka amin'ny hatsarana tena manokana sy hafa, nefa izany dia mampiavaka azy manokana noho io antony io. Manana sary 3D izy ary tsara ny kalitao amin'ny fotoana rehetra. Ary koa, tokony homarihina tsotra toy inona ny fanaraha-maso amin'ity lalao ity. Satria mahatonga ny mpampiasa hanana traikefa tena tsara amin'ny fotoana rehetra. Manana iray isika ekipa sy mpilalao maro an'isa azo isafidianana. Ho fanampin'izay, rehefa mandresy isika dia afaka manamboatra azy ireo.
endri-javatra fomba lalao isan-karazany, ao anatin'izany ny maody asa. Azontsika atao koa ny mahita ny statistikan'ny ekipantsika baseball amin'ny fotoana rehetra afaka manatsara azy. La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Toy ny lalao hafa, manana fividianana ao anaty ianao.
Izany dia ny safidinay amin'ireo lalao baseball tsara indrindra ho an'ny Android. Noho ireo lohateny ireo dia mahaliana sy mampiala voly kokoa ny mahita ity fanatanjahantena tena malaza any Etazonia ity. Ka izany no safidy tsara hialana amin'ny lalao baolina kitra na baskety mahazatra misy Android ankehitriny. Ahoana ny hevitrao momba ity lalao lalao baseball ity? Misy olona iray misongadina kokoa ve ho anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao baseball tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao solitaire tsara indrindra ho an'ny Android
Ny tetika tsara indrindra ho an'ny Google Pixel 2